Twitter na Video, Dị ka ahụekere butter na jelii | Martech Zone
Mọnde, Jenụwarị 12, 2015 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
N'ezie telivishọn bụ usoro ọdịnala guzosiri ike, mana mgbe anyị tinyere omume ihuenyo nke abụọ, ọ dị m ka ụfọdụ ndị na-ajụ mmekọrịta dị mma karịa ndị ọzọ. N'etiti Facebook na Twitter, ahụrụ m ọtụtụ mkparịta ụka na-eme n'ime Facebook karịa na Twitter. Mana na Twitter, a na m ahụ ọtụtụ ederede ndị nwere ike ma ọ bụ ghara ịzaghachi nzaghachi.
Ọ bụrụ na etinye m aka na telivishọn, echeghị m na m chọrọ itinye aka na mkparịta ụka na-agba ọsọ ma ọ bụ na-arụrịta ụka - yabụ Facebook anaghị adị m mma. Ọzọkwa, ọ bụ nkwenkwe m na etinyere hashtags n'ime omume nke ndị ọrụ Twitter. Igwe onyonyo na-agbakwunye onwe ya nke ọma na hashtag… na ọtụtụ ihe ngosi na mkpọsa ngwa ahịa ugbu a na-esonyere hashtag pụrụ iche ka ị na-ele.
Ya mere… enwere omume nke ndị ọrụ Twitter na-eme ka ha dịkwuo nso na telivishọn? Ma ọ bụ na ọ bụ naanị okwu nke onye na-agbazinye onwe ya ka mma na omume ihuenyo nke abụọ? Nkwenkwe m bụ nke ikpeazụ! Kedu ụzọ ọ bụla, o doro anya na enwere njikọ dị ukwuu n'etiti ha abụọ.
Na-ewere nke anyị -acha ọcha akwụkwọ na infographic ọnụ, anyị na-achọpụta na ndị ọrụ Twitter nwere ike ịlele TV ma bụrụ ndị nwere ike ịbụ ndị nwere mmetụta na mkpebi nke ndị ọzọ mgbe a bịara n'okwu nke "gịnị ka m ga-ele na-esote?" O yikarịrị ka a ga-achọ ha maka echiche ha na TV, ma na-arụ ọrụ n'ime oghere. Gavin Bridge, IPSOS
Nke a bụ IPSOS infographic. Jide n'aka na ibudata akwụkwọ akụkọ ahụ, Mmetụta Twitter: ingghọta Ọrụ Twitter na Omume TV, maka nkọwa ndị ọzọ.
Tags: 2 ihuenyoipsosihuenyo nke abụọtelivishọnomume telivishọntvomume TVTwittermmetụta twitter
Kedụ ka Odịnaya Mgbasa Ozi Ga-emetụta ellingre Gị?